Hoggaamiya dhaqameedka Absame oo dawlada Puntland ugu baaqey inay xubnaha ONLF u soo gudbiyaan DDS. – Radio Daljir
Hoggaamiya dhaqameedka Absame oo dawlada Puntland ugu baaqey inay xubnaha ONLF u soo gudbiyaan DDS.
Jigjiga, Nov 09 – Shir ay isugu yimaadeen Hogaamiye dhaqameedyada, Garaadada, Ugaasyada, Salaadiinta, Caaqilada, Nabadoonada, Cuqaasha, iyo odayaasha bulshowaynta Soomaalida ee ku dhaqan Degaanka Soomaalida ayaa maanta ka dhacay Xarunta Shirarka ee Xafiiska Arrimaha Haweenka ee DDS.
Kulankan oo gogoshiisa ay dhigeen hogaamiye dhaqameedyada beesha Absame oo ay hor kacayaan Garaad Maxamuud Dool Xirsi & Ugaas Maxamuud Axmed Siciid waxaa ay ku cambaareeyeen aflagaadada iyo xumaanta dadka sheeganaya magaca beelaha Degaanka Soomaalida dagan ay ku samaynayaan dadka reer Puntland. Waxaa shirkan lagu lafa-guray wax ay ku tilmaameen xumaanta iyo sharka ay kooxaha nabad-diidku ka dhex wadaan beelaha walaalaha ah ee qowmiyada Soomaalida. Shirkan oo ka dhashay warar idaacadaha qaarkood laga sheegayay dhawaanahan oo sheegayay in beesha Absame ay cadaawad ula taagan tahay beelaha Soomaaliyeed ee dagan Puntland ayaa waxay hogaamiye dhaqameedyada ku sheegeen inayna waxba ka jirin.
Odayaashaas kulanka isugu yimid waxay sheegeen in dadka dibadaha ka hadlaya ee ku faanaya inay cadaawad iyo fidno ka dhex abuuraan dadka wada dhashay ee ku nool Puntland iyo Dawlad Degaanka Soomaalida Itoobiya ayna matalin shacabka Degaanka Soomaalida, balse ay yihiin budhcad iyo budhcad kalkaal aan wax wada dhalasho iyo xidhiidh ah aan la lahayn shacabka Degaanka Soomaalida.
Odayaasha kulankan ka hadlay oo aad u fara badnaa ayaa waxay Dawlada Maamul Goboleedka Puntland ka codsadeen in loo soo dhiibo dambiilayaasha dhiiga iyo dhagarta ka galay shacabka Degaanka Soomaalida guud ahaantii, gaar ahaan shacabka beesha Ogaadeenka ee ku nool Degaanka Soomaalida.
Garaad Maxamuud Dool Xirsi oo furitaankii kulankan ka hadlay ayaa carabaabay in dambiilayaashaas laga qabtay maamulka Goboleedka Puntland ayna ahayn Ogaadeen balse ay yihiin cadawga Ogaadeenka iyo Soomaalida kaleba. Garaad Maxamuud Dool oo ku hadlaya magaca beesha Absame ee gogosha dhigtay ayaa tilmaamay in nimankaasi ay dhibaato iyo waxyeelo wayn ku hayeen shacabka Degaanka Soomaalidaiyagoo dilay dad fara badan oo tiradoodu ka badan tahay 1500 oo qof oo maati ah, oo isugu jira Odayaal, dhalinyaro, caruur, hooyooyin, cuqaal, iyo aqoon-yahan, isla-markaana gubay hanta iyo gawaadhi fara badan oo xataa qaar ka mid ahi ay lahaayeen dad u dhashay Maamul Goboleedka Puntland.
Sidoo kale, Ugaas Maxamuud Axmed Siciid ayaa sidoo kale sheegay in dambiilayaash lagu hayo Puntland ay yihiin kuwii ka danbeeyay dilka ugaasyo, salaadiin, cuqaal, wax-garad, iyo indheer-garad ku jiray beesha Ogaadeen.
Nabad-Doon Xaaji Gaboobe Daahir Nuur ayaa sidoo kale cambaareeyay dadka xumaanta iyo fidnada ka dhex abuuraya shacabka wada dhashay ee walaalaha ah. Wuxuu Nabad-Doon Gaboobe tibaaxay in dambiilayaasha budhcada ah ee lagu qabtay Puntland ay yihiin shuftada iyagoo ka tirsan budhcada nabad-diidka dilay dad biri-ma gayda ah oo ay ka mid yihiin, Suldaan Cali Saafi, Caaqil Luqun-Dhure, Nabad-doon Kadawa iyo kuwa kaloo oo badan. Hogaamiye dhaqameedku waxay sidoo kale sheegeen in nimankaasi ay qudha ka jareen culimo-u-diin iyo hooyooyin fara badan.
Suldaan Aadan Yuusuf Taani ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatada ay dadka ku hayaan budhcada nabad-diidka, wuxuuna tilmaamay in ay tahay wax lagu qoslo dadka maanta dambiilayaasha sida Cabdi Teerso iyo Faseex Cataab yidhi waa arday fasax ku tagaysay dhulkoodii. Wuxuu Suldaan Aadan Yuusuf Taani uu kulankaas uga sheekeeyay dhacdooyin murugo leh oo uu u soo taagnaa oo ay ku kaceen nimankaas budhcada ah, wuxuuna maamulka Dawlad Goboleedka Puntland ka codsaday in ayna u nuglaanin beenta iyo borobogaandhada ay qawlaystada nabad-diidka ahi meelaha ka tidhaahdo.
Ugu-dambaystii waxay Hogaamiye dhaqameedka beesha Ogaadeen ka codsadeen, culimo-u-diinka, shacabka, iyo masuuliyiinta Dawlada Maamul Goboleedka Puntland inay eedaysanayaashaas u soo dhiibaan maamulka Dawlad Degaanka Soomaalida si maxkamad cadaalad ah loo saaro. Baaqii ka soo baxay kulankaas iyo uuqaalka shirka oo video ah ayaa shabakada CakaaraNews idiinka soo baahin doonaa, iyadoo sidoo kale muuqaalkaas laga heli karo bogga Shabakada CakaaraNews ku leedahay Mareegta YouTube.
Il – cakaaranews.com